Bioaqua Pearl Delicate Silky Body Cream/Lotion အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Bioaqua Pearl Delicate Silky Body Cream/Lotion
ရောင်းချသူ: Thiri Yadanar Tun
Price : 5500ks
10စက္ကန့်အတွင်း အသားဖြူ မှုကို မရယူချင်ဘူးလားရှင် ???
15000အမြတ်နော် ပစ္စည်း q ကစိတ်ချရလို့
နဖူးမှ ခြေဖျားထိ 10စက္ကန့်အတွင်း မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ဖြူစင်ဝင်းပစေဖို့ Bioaqua Pearl Delicate Silky Cream လာပါပြီရှင် ??
10 စက္ကန့်အတွင်း နဂိုထက် အဆပေါင်းများစွာ ဖြူ ဝင်းနူးညံ့စေမှာပါ
- မနက် ၁ကြိမ် ည ၁ကြိမ် တကိုယ်လုံး အနှံ့လိမ်းခြင်းဖြင့် 10စက္ကန့် အတွင်း ဖြူဝင်းလှပလာစေတာ ကို ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်ပါနော်
ပုံမှန်စွဲလိမ်းပေးခြင်းဖြင့် အသားအရည်ကို အမှန်တကယ် ကြည်လင်ဖြူဝင်းလာစေမှာပါနော်
အတိုအပြတ်လေးတွေဝတ်ပြီး လန်းချင်တဲ့အခါ ခြေထောက်လေးတွေ လက်လေးတွေကို အနာအဆာမရှိ ဖြူဖြူဝင်းဝင်းအိအိလေးနူးညံ့ လှပနေစေမယ့် cream လေးနော်
Spf 50 PA +++ လည်း ပါလို့ နေရောင်အောက်မှာ ဖြူ
ဝင်းလှပစွာ နဲ့ အေးအေးဆေးဆေးလေး သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်ပြီနော်
အမည်: Bioaqua Pearl Delicate Silky Body Cream/Lotion